Ngubani Ophumelele Ukudanisa Ngeenkwenkwezi - Imbali Yedance
Ngubani Ophumelele Ukudanisa Ngeenkwenkwezi
UKellie Pickler kunye noDerek Hough
Uphefumlelwe ngothotho olunempumelelo kakhulu lwaseBritane, Ukudanisa ngeenkwenkwezi ikhule yenzeka kwihlabathi lonke engabonakalisi zimpawu zokuma. Isizini nganye isithsaba inkwenkwezi ephumeleleyo kunye neqabane lakhe lokudanisa.
Abaphumeleleyo bexesha elidlulileyo lokuDanisa ngeenkwenkwezi
Abaphumeleleyo Ukudanisa ngeenkwenkwezi yisa ekhaya i-Mirror yeBhola eyinqwenelekayo. Ukuza kuthi ga ngoku, abaphumelele kolu khuphiswano babandakanya ezi zibini zilandelayo.
Dumisa isinxibo somdaniso
Ixesha lama-21, 2015: UBindi Irwin noDerek Hough
Ababukeli babethwa ngoko nangoko noBindi Irwin, intombi kaSteve Irwin ongasekhoyo. UBindi ungumntu ongumabonakude kunye nolondolozo e-Australia, kwaye amandla akhe kunye nokuziphatha kwakhe kwamenza ukuba athandwe kwangoko kolu khuphiswano. Ngoku ubotshelelwe oyena mncinci uphumeleleyo kulo mdlalo eneminyaka eyi-17 (uShawn Johnson wabelana ngesihloko), kunye neqabane lakhe uDerek Hough uye wonyusa inani lakhe elipheleleyo laya kwisithandathu.
Ixesha lama-20, 2015: URumer Willis kunye noValentin Chmerkovskiy
Imvumi kunye nomdlali weqonga uRumer Willis, okwayintombi ye-Hollywood A-listers uBruce Willis noDemi Moore, babetha abanye abalishumi elinanye ukuba baphumelele Ukudanisa ngeenkwenkwezi Ixesha lama-20. Iqabane lakhe lobungcali, uValetin Chmerkovskiy, ngumninawa omncinci ka I-DTWS pro-ngumdanisi Maksim Chmerkovskiy.
Ixesha le-19, 2014: UAlfonso Ribeiro kunye noWitney Carson
UAlfonso Ribeiro ungqine ukuba angadanisa ngcono kunaye INkosana entsha yeBel Air I-alter-ego, uCarlton, xa waphumelela ixesha le-19 I-DWTS kunye neqabane lakhe uWitney Carson. Ngapha koko, uRibeiro ngumdanisi ophumeleleyo enelungelo lakhe-ayenzanga nje kuphela kwi-Broadway njengomntwana, kodwa wadibana noMichael Jackson kurhwebo lwePepsi.
Ixesha le-18, 2014: UMeryl Davis kunye noMimsim Chmerkovskiy
Umtyibilizi ongumkhenkce oqeqeshiweyo nomdanisi womkhenkce uMeryl Davis wafaka ibhrasi yebhola yesipili kwisizini ye-18. Iqabane lakhe lokutyibilika kwislingisi uCharlie White naye wayelilungu lesamente, esenza isizini enokhuphiswano ngakumbi. UDavis ubambe irekhodi lelona nqanaba liphezulu lodumileyo kuwo onke amanqaku akhe: i-28.4 engummangaliso ngaphandle kwama-30.
luthuthu luthuthu nothuli
Ixesha le-17, 2013: U-Amber Riley noDerek Hough
UAmber Riley, owaziwa kakhulu ngendima yakhe njengoMercedes Jones Glee , ubambisene no-Derek Hough ophumelele kakhulu ukuba athabathe ixesha lokuphumelela le-17. Ngamanqaku amahlanu afezekileyo kunye nenqaku elinye kuphela kulo lonke ixesha lonyaka ophantsi kwe-8/10, uRiley wabetha ngokulula abanye abagqwesileyo uCorbin Bleu noJack Osborne.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumanisa unobangela wokufa?
Ixesha le-16, 2013: UKellie Pickler noDerek Hough
UKellie usenokugqiba i-6th kwisizini yesihlanu Idol yaseMelika , kodwa yena kunye neqabane lakhe uDerek Hough balubetha ukhuphiswano baza bagoduka nesipili yebhola. Le yayiyintshatsheli yesine kaHough, imnika ezona mpumelelo kwimbali yomboniso ukuza kuthi ga ngoku.
Ixesha le-15, 2012: UMelissa Rycroft kunye noTony Dovolani
UMelissa Rycroft kunye noTony Dovolani
Owayesakuba nguDallas Cowboys cheerleader kunye Isidanga Inkwenkwezi uMelissa Rycroft wafumana ithuba lesibini kwibhola enomdla xa wayejoyina isizini ye-15 Zonke iiNkwenkwezi. Ukhuphiswano lwalulukhuni, kodwa uRycroft kunye neqabane lakhe uTony Dovolani bazifumana bekhuphisana nabaphumelele ngaphambili kumaxesha 1 no-8 kumjikelo wokugqibela. Abagwebi bakufumanisa ukudanisa kukaMelissa kumnandi, kodwa inokuba yayingabalandeli bexesha elide ababonisa ukuba bavotele umfana olungileyo uTony Dovolani ngaphezulu ukunika isibini indawo yabo kwimbali yesipili.
Ixesha le-14, 2012: UDonald Driver kunye nePeta Murgatroyd
IGreen Bay Packer uDonald Driver usenokuba uqalile isizini yesibini ukusuka ezantsi, kodwa wafikelela kwinqanaba elifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Zontathu izibini zokugqibela zatsala amashumi amathathu eejaji, kodwa uMqhubi kunye neqabane uPeta Murgatroyd's Cha Cha wabasa empumelelweni.
Ixesha le-13, 2011: UJR Martinez noKarina Smirnoff
UJR Martinez yenye ye I-DWTS Abakhuphiswano abakhuthazayo Wayelilungu leqonga lesepha ngoku engasasebenziyo Bonke abantwana bam , kodwa ukwaligqala lomlo waseIraq othe watsha ngaphezu kweepesenti ezingama-40 zomzimba wakhe. Ohamba nabo bakhuphisana nabo uRob Kardashian kunye noCheryl Burke kwiivoti zeejaji ngenqaku elinye kumjikelo wokugqibela, umoya ka-JR wokungalawuleki kunye nokudanisa italente iphumelele iivoti zababukeli kwaye yamthwala kunye neqabane lakhe uKarina Smirnoff ukuba baphumelele.
Ixesha le-12, 2011: I-Hines Ward kunye noKym Johnson
Abadlali beNFL bahlala behamba kakuhle I-DWTS , kunye neWadi, yePittsburg Steelers udumo, kwakungekho ngaphandle. Akukho mntu ungaziwayo kumanqaku afanelekileyo, ii-Hines kunye neqabane uKym Johnson bafumana amanqaku angama-30 ngokugqibeleleyo ngomdaniso wabo wasimahla. I-Quickstep yabo ifumene amanqaku angama-29 kwangama-30 ukuzisa impumelelo ekhaya.
Ixesha le-11, 2010: UJennifer Grey kunye noDerek Hough
UJennifer Grey abaphulaphuli bokuqala abanomdla kunye nezakhono zakhe zokudanisa Ukudanisa mdaka kunye noPatrick Swayze. Ubudala beminyaka engama-50 ngexesha lokuphumelela kwakhe, wayeyinkwenkwezi endala ukugoduka nesipili ukuza kuthi ga ngoku. Nangona kunjalo, ukuphumelela akuzange kufike ngokulula, nangona esi sibini sasihlala siphezulu okanye sikufutshane nomphezulu webhodi yabakhokeli kulo lonke ukhuphiswano. Grey kwafuneka oyise ukukhubazeka ngokwasemzimbeni, kubandakanya nokwenzakala entanyeni, ukubanga indawo yakhe kuyo I-DWTS imbali.
Ixesha le-10, 2010: UNicole Scherzinger kunye noDerek Hough
UNicole Scherzinger wayesaziwa kakhulu njengemvumi yeePussycat Dolls ngaphambi kokuba angene I-DWTS , kwaye waqatshelwa njengoyena mntu ulwela indebe kumdaniso wakhe wokuqala noHough. Esi sibini sifumene amanqaku aphezulu kulo lonke ixesha lonyaka, ekugqibeleni sibanga isihloko sexesha leshumi.
Ixesha le-9, 2009: UDonny Osmond kunye noKym Johnson
UDonny Osmond ebenomdla kubabukeli ukusukela ebuntwaneni njengenxalenye yeOsmonds. Ukudityaniswa noKym Johnson, isibini saseArgentina uTango wanconywa 'njengembongo eshukumayo' nguCarrie-Ann Inaba, kunye nomdaniso wesitayile samahhala kumdlalo wamanqam wabanika amanqaku afanelekileyo kwaye, ekugqibeleni, isibuko sebhola.
Zithetha ntoni iziporho zobuso besiporho
Ixesha le-8, 2009: UShawn Johnson kunye noMark Ballas
UShawn Johnson ngumzimba wokuzivocavoca onamava ongaqhelekanga ekuhambeni komzimba kunye nokuchaneka kwezemidlalo. Ukwanomnwe wobabalo wokuhamba kunye neetalente. Le mpumelelo yexesha lesibhozo lomboniso lagweba iijaji, bafumana amanqaku aphezulu kwimidaniso yesiLatin efana neArgentine Tango, Cha Cha, kunye nePaso Doble.
Ixesha lesi-7, 2008: UBrooke Burke kunye noDerek Hough
U-Brooke Burke ungumntu kamabonwakude okhawuleze wanyuka waya phezulu kwixesha lesixhenxe lomboniso. Ufumene, kunye neqabane lakhe uDerek Hough, amanqaku afanelekileyo kwaye wavuthela ukhuphiswano emanzini phantse ukusuka kwisiqendu sokuqala sonyaka.
Ixesha lesithandathu, 2008: UKristi Yamaguchi kunye noMark Ballas
Umzobi skater uKristi Yamaguchi ufumene ibhaso lesizini ephezulu yesithandathu kwaye ubambe imbeko eyongezekileyo yokuba akukho namnye umdanisi odumileyo kumdlalo osele efumene-ukufezekisa amanqaku afanelekileyo angama-30 kuyo yomithathu imidaniso yakhe eya kumdlalo wokugqibela womboniso.
Ixesha lesi-5, 2007: UHelio Castroneves noJulianne Hough
imibuzo ubuhlobo ukubuza intombi yakho
Esi sibini somdaniso sifumene amanqaku afanelekileyo ngexesha lokudibana kwabo kumdlalo. Eyona midlalo yabo yomdaniso iphumeleleyo yayiyeyokukhetha ngokukhawuleza nangamandla, njenge-Quickstep, iCha Cha kunye neFoxtrot.
Ixesha lesi-4, 2007: UApolo Anton Ohno noJulianne Hough
U-Ohno no-Hough bafumana amanqaku amaninzi, ngakumbi kwi-Samba kunye ne-Paso Doble. Abaphulaphuli abathandayo, ngamanye amaxesha kucingelwa ukuba esi sibini sasimiselwe ukuphumelela ixesha le-4 kwasekuqaleni.
Ixesha lesithathu, 2006: U-Emmitt Smith kunye noCheryl Burke
U-Emmitt Smith mhlawumbi waziwa ngcono ngeentsuku zakhe edlalela i-Dallas Cowboys, kodwa njengomntu ophumeleleyo wesithathu, ukudanisa kwakhe kufanelekile ngetyala elikhulu. Ukufumana amanqaku aphezulu kuMambo kunye neSamba, uSmith uqinisekile ukuba ujongeka ngathi wonwabile ngelixa edanisa kumdlalo.
Ixesha lesibini, 2006: UDrew Lachey noCheryl Burke
Umculi weqela le-98 Degrees, uLachey wangqina ngexesha lesibini le- I-DWTS ukuba izakhono zakhe zokudanisa zilungile zonke izakhono zokucula. U-Lachey kunye neqabane lakhe uCheryl Burke beza kwindawo yokuqala uninzi lweeveki ngexesha lesibini lomboniso.
Ixesha loku-1, 2005: UKelly Monaco kunye no-Alec Mazo
UMonaco yimodeli eyaziwayo kunye nomlingisi, mhlawumbi owaziwa kakhulu ngendima yakhe IBaywatch kwaye Isibhedlele ngokubanzi kunye nokuvela kwi Umdlali odlalayo kwaye Ubuninzi iimagazini. Iitalente zakhe zokudanisa zingqineke zilingana neetalente zakhe zokubambela kunye nemodeli njengoko wayeqhubeka nokuba ngoyena mntu uphumeleleyo kuye Ukudanisa neenkwenkwezi .
Abaphumeleleyo kwixa elizayo
Nokuba ngubani ophumeleleyo kwixesha ngalinye lonyaka, Ukudanisa neenkwenkwezi uhlala ungumzekelo obalaseleyo wobugcisa kunye nenkcubeko edumileyo yokuhlangana ngendlela elungileyo. Kuya kuba mnandi ukubona ukuba zeziphi iinkwenkwezi ezibhalisela ixesha elizayo, kunye nokuba zeziphi izibini eziza kujoyina uluhlu lwabaphumeleleyo.
Ubunzima Ubunzima Ukuzivocavoca Iwayini Ingingqi Ikati Care Special Occasion Decorating Malunga Iincwadi Zabantwana
ifuzisela ntoni intaka ebomvu
indlela yokufumana kwakhona imiyalezo evela kwenye ifowuni
ifriji iyanuka kodwa akukho kutya kubolileyo
uyisusa njani i-overspray kwiglasi
I-DIY baby shower decorations kwintombazana
kufuneka wenze ntoni ukuze ube ngumhambi wenqwelomoya
Ungayinika inja i-aspirin yosana